Ngosi: Ntinye aka na Nchọpụta Nchọpụta Nnyocha | Martech Zone
Satọde, Ọgọstụ 21, 2010 Saturday, October 18, 2014 Douglas Karr
Nchọpụta nke mbụ m sitere na mmalite nke SEOmoz naanị site na ọdịnaya anaghị akwụ ụgwọ na saịtị ha. Dị ka anyị ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọhụrụ etoola na SEO abụrụla ihe dị mkpa… na ihe dị mkpa maka usoro mmekọrịta mmadụ na ibe m time oge m nọrọ na SEOmoz na ịgwa ndị otu nọ na-arịwanye elu.
Nke a bụ a kediegwu iwebata ka search engine njikarịcha na Moz weghachiri azụ mgbe ha na-eme SEOMoz. Ọ na-enye ụfọdụ nghọta doro anya banyere etu igwe nchọta ọrụ si arụ ọrụ yana otu esi achịkọta ozi gị, edepụta ya ma debe ya.
Tags: Intoro ka seosearch engine njikarịchaisi seoseo mbidoseomoz